Samsung handefa kinova dual-SIM an'ny Galaxy Note 8 any Eropa | Androidsis
Ny fampahalalana amin'ny pejy fanohanana ny vavahadin-tranonkala Samsung dia manolotra izany ny orinasa dia handefa any Eropa ny kinova dual-SIM an'ny Galaxy Note 8, izay maodely ho fantatra miaraka amina kaody SM-N950F / DS. Na izany aza, ny vaovao ratsy dia ity modely ity dia hanasongadina a fonosana hybrid, noho izany ny mpampiasa dia tsy maintsy sorona ny fampiasana microSD amin'ny vidin'ny fampiasana SIM faharoa.
Soa ihany, fa amin'izao fotoana izao dia inoana fa ho tonga ny Galaxy Note 8 miaraka amin'ny fahatsiarovana anatiny hatramin'ny 256GB amin'ny faritra sasany, ka tsy ilaina ny fampiasana karatra fahatsiarovana fanampiny. Fa raha hitanao fa mihalatsaka ambany amin'ny habakabaka amin'ny fitaovana ampiasainao ianao, dia misy sehatra fitahirizana rahona betsaka, na maimaim-poana, toy ny Dropbox, Google Drive na degoo, serivisy izay notsipihinay tato ho ato ary manolotra izany Habakabaka maimaimpoana 100GB.
Raha ny fivoahana farany indrindra dia ho tonga miaraka amin'ny a ny Galaxy Note 8 Fampisehoana Infinity 6.3-inch, processor Snapdragon 835 / Exynos 8895, RAM 6GB ary batterie 3.300 mAh. Izy io koa dia hanana ny rafitra fiasa Android 7.1.1 Nougat ao anaty boaty, na dia azo antoka fa havaozina amin'ny Android O afaka volana vitsivitsy na herinandro maromaro aza, satria hanomboka amin'ity volana ity i Google kinova Android 8.0 ho an'ny Google Pixel sy Nexus.
Mikasika ny vidiny kosa dia naseho vao tsy ela izay ny Galaxy Note 8 no finday avo lenta indrindra an'ny Samsung mandraka ankehitriny, miaraka amin'ny vidiny 1000 euro any Eropa.
Ny Samsung Galaxy Note 8 dia haseho mandritra ny hetsika kasaina hatao ny 23 aogositra ho avy izao, andro iray izay ahitantsika ny fahatongavan'ny GearFit 2 Pro, fitaovana fanatanjahan-tena fahatelo an'ny orinasa, izay hitondra fitomboan'ny rano fanoherana sy fanohanana amin'ny filalaovana mozika Spotify ivelan'ny Internet, ary koa fitaovana virtoaly virtoaly GearVR vaovao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Samsung handefa kinova dual-SIM an'ny Galaxy Note 8 any Eropa
Sary voalohany sy manokana momba ny Huawei Mate 10